Caleemasaarka Axmed Madoobe oo todobaadkaan lagu qabanayo magaaladda Kismaayo. | Somsoon
Home WARAR Caleemasaarka Axmed Madoobe oo todobaadkaan lagu qabanayo magaaladda Kismaayo.
Caleemasaarka Axmed Madoobe oo todobaadkaan lagu qabanayo magaaladda Kismaayo.
Warar lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in mar kale la qorsheeyay xilliga la qabanayo calemsaarka Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaasi oo dib loo dhigay markii ay Dowladda faderaalka ah hor istaagtay wufuudii ka qayb geli lahayd.
Ilo-wareedyo ku sugan magaaladda Kismaayo ayaa sheegaya in Sagaalka (9) bishaan loo qorsheeyay in la qabto caleema saarka Axmed Madoobe islamarkaana ay ka qayb galayaan Madaxdii hore ee dalka, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Lama oga sida ay ku suurta geli doonto in magaaladda Muqdisho ay ka baxaan wafdi doonaya in ay kismaayo aadaan.
Dowladda Federal-ka ah ayaa wafdi uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed u diiday in magaaladda Kismaayo aadaan si ay uga qayb galaan caleemasaarka Axmed Madoobe oo markii hore la qorsheeyay in la qabto 26-kii September. Balse wafdigii baaqday dartiis ayaa dib loogu dhigay caleemasaarka Madaxweyne Madoobe.
Muran iyo is qab-qabsi siyaasadeed ayaa ka dhashay horistaagii lagu sameeeyay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxaana sidoo kale maalmo kooban la joojiyay duulimaadki tagi jiray mgaaladda Kismaayo.
Wasaaradda Arrimaha guda ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa diiday in ay aqoonsato natiijooyinkii iska soo horjeeday dabaqaayqaddii August kasoo baxay magaaladda Kismaayo-halkaas oo Axmed Madoobe guul sheegtay labo siyaasi oo kalena ay sheegeen in Madaxweyne loo doortay.
Article horeBurcadda Internet-ka Iran oo u dhacday ololaha doorashadda Maraykanka.
Article socoda Xilliga la furayo kalfadhiga 6 aad ee Baarlamaanka oo la shaaciyay